लोकसंवाद संवाददाता, असार ११, २०७९
सायद, यही ग्रह मात्रमा हामी जस्तै मृत्यु बोकेका प्राणीहरू छौँ कि ? यो पृथ्वी अर्थात् मृत्यु लोकका हामी प्राणी मध्येका मानिसहरु कति सचेत छौँ भने हामी आफ्ना मात्र कुरा गर्दैनौँ । अरुका पनि कुरा सोच्छौँ, गछौं र त्यसबारेमा अनेक उपाय...
टेलिभिजनका पर्दामा प्रस्तोताका रुपमाप्रश्नको बर्षा गरेर चर्चा कमाएका रवि लामिछानेले मंगलबार राष्ट्रिय सभागृहबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गर्न पुगे। रविले पार्टी घोषणा गरेलगत्तै दुई वटा प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न र आलोचनाका रुपमा आइरहेका छन् । पहिलो, राजनीतिले &#39;स्वतन्त्र&#39; लाई पनि...
बिचौलिया र दलालको चङ्गुलमा संघीयता: 'प्रदेश' नामक 'सेता हात्ती' माथि प्रश्नै प्रश्न
दीर्घराज उपाध्याय प्रदेश सरकारहरूको पाँचौँ तथा अन्तिम पूर्ण बजेट सार्वजनिक भइसकेका छन् । संभवत: केही दिनमा ती पास पनि हुनेछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि बजेट आएको छ । नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीलगायतका प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू...
लोकसंवाद संवाददाता, असार ५, २०७९
तारा वाग्ले सामान्यतया निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी सबै पद शृंखला पार गर्दै विशिष्ट तहसम्म पुगेका हुन्छन् । तर, सहसचिव राधिका अर्यालले चाहिँ शाखा अधिकृतबाट उपसचिव नभई सिधै सहसचिवमा फड्को मार्नुभयो । सहसचिव राधिका अर्यालले अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको...
लोकतन्त्रका उपहार: कुशासन र भ्रष्टाचार
पूर्ण ओली, असार ५, २०७९
पंचायती व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको मात्रा सीमित थियो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सरकारका प्रमुखबाटै लाउडा, धमिजा जस्ता ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्ड सुरु भए । त्यतिखेर अख्तियारलाई पनि केही सक्रिय बनाइयो, जसले केही नाम चलेका भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्नेसम्मको कारबाही भयो । पछिल्लो अवस्थामा लोकतन्त्रको...
दोहोरो चरित्रको जालमा नेपाली राजनीति: एसपीपीमा नेपाली सेनाको ‘खत’ सँगै एमालेको मलिन स्वर !
अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) का विषयलाई लिएर यतिबेला राजनीतिक दल र नेताहरुबीच आरोप प्रत्यारोप चल्ने क्रम जारीछ । नेपालका राजनीतिक दलहरुमा सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ताबाट बाहिरिएपछि अर्को बोली बोल्दै जनतालाईभ्रमित पार्ने पुरानै तरिका यसपटक पनि सतहमा छताछुल्ल हुन...
हरिविनोद अधिकारी, असार ४, २०७९
२०३१ सालबाट सुरु गरेको शिक्षण कार्य आजसम्म पनि निरन्तर छ । नियमितरुपमा त सामुदायिक विद्यालयबाट निवृत्त भएकै हुँ तर हामी आफैँले प्रयास गरेर खोलेको सामुदायिक क्याम्पस काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पसमा आत्म रतिका लागि भए पनि कहिलेकाहीँ पढाउँदै छु । अर्थात् करिब...
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ ३१, २०७९
अमेरिकी उच्च सैन्य अधिकारीको भ्रमणसँगै नेपाल अमेरिकी सैन्य मोर्चामा पुग्ने खतरा बढेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सञ्चालन गरिरहेको विदेश नीतिले देश असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई छाडेर नेपाल अमेरिका पक्षीय सैन्य मोर्चामा खडा हुने खतरा उत्पन्न भएको छ ।...
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ज्यू, ओरालो लागेको शेयर बजार उकास्ने कि राजीनामा दिने ?
उमेश थापा, जेठ २९, २०७९
अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माका कारण शेयरमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरूडुबेर सडक छाप हुन लागेका टिप्पणी आइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको परिवार र आफन्तका नाममा विभिन्न ४ लाख कित्ता शेयर छ । पहिला आफ्नो शेयरको मूल्य बढाउनकालागि पनि गर्भनरको ठूलो...
प्रश्न बजेट पारदर्शिताको, सुझाव सुधारका लागि
सुवास दाहाल नेपालले बजेटका प्रमुख दस्तावेजहरू खासगरी पूर्वबजेट र नागरिक बजेट सार्वजनिक नगरेर साथै वार्षिक प्रतिवेदन ढिला प्रकाशन गरेर बजेट सूचनाको सार्वजनिक उपलब्धता घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी, आईबीपी नामक विज्ञ संस्थाले गरेको पछिल्लो खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल...
सिद्धान्तको सीमा मिच्न सबै अनिच्छुक: संस्कृत वाङ्मयको अध्ययनबिना संसार बुझ्नै कठिन !
हरिविनोद अधिकारी, जेठ २८, २०७९
आत्मकथा या आफ्नो जीवनीका कथा आफ्नै हातबाट कसरी सम्भव हुन्छ ? के त्यसमा आत्माभिमानको पुट हुँदैन र ? या त्यसमा कतिपय त्यस्ता कुराहरू राखिन्छन्,जुन समाजलाई थाहा छ तर आफूचाहिँ भन्न सक्दैन ? भन्दैन ? या त्यस्ता कुराहरू छन्, जुन उसलाई...
किन दियो चीनले केपी ओलीका क्षेत्रमा औद्योगिक पार्क बनाउन रकम ?
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ २७, २०७९
२०७७ फागुनको एउटा समाचार सम्झनुभएको छ ? &#39;नेपालकै ठूलो र दक्षिण एसियाकै नमुना भनिएको चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको छ । झापाको दमकस्थित रतुवा र मावा नदीबीचको १ हजार ४२२ दशमलब २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उक्त...
दल भर्सेस स्वतन्त्र: असन्तुष्टिमात्र कि व्यवस्थामाथि नै उथलपुथल ल्याउने परिघटना ?
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ २६, २०७९
देशमा यतिबेला संसद भएजस्तो रौनक छ । चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि कुम्भकर्णका झैँनिद्रामा रहेका सांसदहरु यतिबेला संसदमा जनताले भोग्नुपरेका अप्ठ्याराबारे संसदमा आवाज उठाउन थालेकाछन् । पछिल्लो करिब ९ महिना एमालेको नाराबाजी, त्यसअघि करिब ७ महिना एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले...
राजनीति विस्तारै आशीर्वादको घनचक्करमा: सिद्धान्तको सितनसित नैतिकताको ह्विस्की घुट्क्याइँदै
रूपक अलङ्कार, जेठ २५, २०७९
राजनीतिमा लाग्नका लागि विचार र सिद्धान्त पनि चाहिन्छ भन्यो भने भन्ने मान्छेले पहिला लाज मान्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।वाद र सिद्धान्तका अनुच्छेद रटान लगाएर खारिएका नेता तथा बुद्धिजीवी पनि पुराना दिन सम्झिएर बारम्बार झस्किरहन्छन् होला अर्थात् केही नेताका त...
असीलाई घाटमा पुर्‍याएपछि कालो झन्डा एक्कासी सेतो ! नैतिकता र सिद्धान्तको नयाँ भाष्यको खोजी
हरिविनोद अधिकारी, जेठ २१, २०७९
म सिद्धान्तको कुरा गर्छु । के हो त सिद्धान्त भनेर मेरो मनमा आउने गर्छ । सिद्धान्त कसरी बन्छ ? सायद सिद्धान्त एउटा लक्ष्यसहितको परिणामको खोजी हो, जुन पहिले अमूर्त हुन्छ तर परिणामचाहिँ मूर्त रूपमा देखिनुपर्छ । जीवनको लक्ष्य के हो...
३५० मा वामपन्थी, ३२९ को कांग्रेस ठुलो दल! जनमतको अपमान गर्नेद्वारा वाम गठबन्धनको बेमौसमी राग
लोकसंवाद संवाददाता, जेठ २०, २०७९
स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि उर्बर भूमि हो भन्ने एकपटक फेरि प्रमाणित गरिदिएको छ । तर कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुँदा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भने कांग्रेस बन्न पुगकोछ । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी,...
लोकप्रियताको कसीमा बजेट: राष्ट्रलाई आर्थिक भार हुने योजना र बजेटमा होड किन ?
अनुरोध शर्मा, जेठ १७, २०७९
हरेक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्षका लागि देशले वार्षिक आय-व्यवको अनुमान अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्छ । वर्तमान संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको १५ जेठमा बजेट ल्याइनुपर्छ । सोहीअनुसार गत १५ जेठमा नेपाल सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट ल्याइनुअघि सरकारले...